Red Hat IT Sign In (SSO) Mandeha Amin'ny Red Hat Virtualization | NY
Red Hat no malaza indrindra amin'ny Red Hat Enterprise Linux (RHEL) ary noho ny maha-mpisava lalana azy amin'ny fanatsarana ny fanatsarana ny loharanom-baovao. Ny ankamaroan'ny fotoana, ireo orinasam-pitrandrahana avy eo dia avy eo dia mazàna ny mombamomba ny Red Hat izay manandratra ny maha-zava-mahasoa azy any amin'ny toerana hafa.
Red Sign Single (SSO) ny Red Hat (SSO) mba hanomezana fanamarinana am-pihetseham-po sy samihafa ho an'ny tranonkala misokatra. Ny fampiharana, toy ny Red Hat SSO, dia azo ampitaina amin'ny fomba samihafa. Red Hat IT nisafidy ny hamihina rahampitso sy antsasaky ny rahona mandefa modely ho an'ny Red Hat SSO, ho toy ny ampahany lehibe amin'ny asa fanentanana ho an'ny https://sso.redhat.com dia ampifandraisina amin'ny iray amin'ireo ivon-tseraseran'ny orinasanay. SSO ary matetika ny fampiharana hafa dia mihazakazaka eo an-tampon'ny Red Hat Virtualization.
Ny tantarantsika amin'ny famolavolana famoronana eo an-tampon'ny Red Hat Virtualization dia miverina midina midina 2010 rehefa nahavaha ny Red Hat IT tanteraka ny Red Hat Virtualization raha mbola teo amin'ny endritsoratra alfa efa mivoaka. Ny Red Hat Virtualization dia namolavola mazava tsara tamin'io hevitra io, kanefa ao am-pony, dia mbola ny vatom-pampandrosoana mahery vaika KVM.
Tahaka ny ankamaroan'ny orinasa, Red Hat dia manangana foibe fananganana antontam-baovao vitsivitsy. Ireo fikambanana ireo dia mandeha amin'ny rindrina 5-10 mankany amin'ny tongotra maromaro. Ao amin'ny tranonkala tsirairay dia miasa ny Red Hat Virtualization bunch (Data Center ao amin'ny kabarim-pitenenana Red Hat Virtualization). Izany dia ahitana mpandinika RHEL sy sampana fitaratra. Misy antontam-baovao maromaro momba ny fandefasana anay dia mety ho hita eo amin'ny fidirana mpanjifa. Mazava ho azy, niova ny tarehimarika maromaro satria ankehitriny dia mihazakazaka isika miaraka amin'ny Red Hat Virtualization 3.6 sy Red Hat Virtualization 4.0.
Ao amin'ny toerana fananganana fototry ny famoronana dia manana ivon-dàlana roa mipetaka amin'ny red Hat Virtualisation sy ny tobin'ny fitantanana izahay. Ireo dia mampiasa tarehy tsy misy endrika sy cluster. Ny fampiharana rehetra dia manana sehatra faran'izay malalaka ny fizarana roa miaraka amin'ny balafomanga iray izay manara-maso ny hetsika amin'ny dingana iray dinamika / dynamique na dinamika / aloof, mifanaraka amin'ny fampiharana. Noho ny Red Hat SSO, ny tambajotra MariaDB dia miaina eo amin'ny lafiny iray ary ny fiainana mafana dia miaina amin'ny lafiny mifanohitra. Miady amin'ny fanovana izany isika amin'ny famolavolana dynamique / dynamique mampiasa Galera. Ny foiben'ny fampiharana Red Hat SSO dia nampitondraina dynamique / dynamique, miaraka amin'ny atody roa ao amin'ny foibe data an'ny Red Hat Virtualization. Ny asa dia entina miovaova eo amin'ny sehatra rehetra an'ny SSH ary manohy ny fampisehoana amin'ny fampiasana ny famandrihana infinispan.
Ny hetsika tonga ao amin'ny https://sso.redhat.com dia ampitahaina amin'ny CDN ary farany nohafohezin'ny fampihetseham-baomiera nanamora ny Red Hat Virtualization na ny klioba SSO ao amin'ny AWS. Amin'ny ankapobeny, ny asa dia alaina amin'ny toeram-pifanerananay satria ireo mpandroba ireo dia manana asa tsara kokoa. Nahita izahay fa ny Red Hat Virtualization VM dia matetika mahavita amin'ny taham-pahaizana mifanaraka amin'ny rafitra metaly mibaribary.
Ny tombony amin'ny Red Hat IT dia manasonia ny Virtualization
Ny tombontsoa azo avy amin'ny Red Hat Virtualization ho an'ny RH SSO dia mihoatra lavitra noho ny famonoana VM. Afaka mandamina haingana sy fanararaotana VMs izahay noho ny Red Hat Virtualization Command Line Interface (CLI) sy ny API. Amin'ny ankapobeny dia afaka manangana sehatra vaovao iray aho amin'ny ampahany farany amin'ny andro iray, noho ny "a for circle", ny Red Hat Virtualization CLI ary ny fampiharana ny fampihetsiketsehana tanteraka.
Ny fahamendrehana sy ny fanatanterahana ny famolavolana ny KVM, izay miorina amin'ny fampiasana ny filaminana sy ny filaminan'ny Red Hat Virtualization dia manome ny fizarazarana IT, ohatra, ny Red Hat IT, mba hahatakarana ny antoka ny fampitaovana haingana sy ny fotodrafitrasa rehefa mandany ny fitaovana fitaovana efa misy. Ankoatra izany, https://sso.redhat.com dia misy fiantraikany amin'ny tontolon'ny Red Hat iray manontolo sy mivelatra, izay mampiseho ny fanoloran-tenan'i Red Hat hanokatra fanavaozam-baovao:
Cloud nomena anarana Red Hat JBoss EAP ho mpandresy amin'ny Best Cloud Middleware amin'ny 2016-2017